Mpanao sinto-mahery… : mitombo isa ireo tsy ampy taona tratran’ny polisy | NewsMada
Mpanao sinto-mahery… : mitombo isa ireo tsy ampy taona tratran’ny polisy
Par Taratra sur 18/04/2018
Mitombo isa hatrany tato ho ato ireo ankizy voasambotry ny polisy noho ny asa fanendahana miharo fifohana zava-mahadomelina teto an-drenivohitra…
Raha ny teny amin’ny faritra Tanjombato sy Mahamasina ary Andavamamba, maro ny fitarainana voarain’ny polisy noho ny fahamaroan’ny andian-jatovo mpanao sinto-mahery rehefa fitohanan’ny fiara eo Tanjombato. Ny 13 avrily 2018 lasa teo nanao hetsika ny polisy ka nanao vela-pandrika sy fanarahan-dia ireo jiolahy ireo. Vokany, tratra ny roa lahy raha tafaporitsaka kosa ny namany telo. Nandritra ny famotorana natao azy ireo no nahafantarana fa efa nigadra intelo teny amin’ny fonjan’Antanimora ry zalahy, saingy miverina manohy ny asa ratsiny indray raha vantany vao mivoaka ny fonja.
Tratran’ny polisin’ny PPA Ampefiloha teny Anosy koa ny jiolahy iray, ny 15 avrily 2018 lasa teo. Manao andiany hatrany koa ry zalahy ireto rehefa manao ny asa ratsiny. Tsy ampy taona ny ankamaroan’izy ireo, araka ny fanazavan’ny polisy.
Ireo mpijery baolina ao Mahamasina no tena lasibatry ry zalahy, raha ny filazan’izy ireo tamin’ny polisy. Maro koa ny fitarainana voarain’ny polisy amin’ny afitsok’ireo olon-dratsy amin’iny faritra Anosy iny noho ny fisian’ireo jiolahy ireo. Noraisim-potsiny teny Ilanivato koa ny tovolahy iray tratra teo am-pifohana rongony. Mifoka rongony kely hatrany ry zalahy mialoha ny hanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Nilaza izy fa mahavita azy mandritra ny herinandro ny rongony iray fonosana 5 000 Ar.